ချစ်စရာ ကောင်းပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ Drag ပြိုင်ကား တစ်စီးအဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ့် Honda E-Drag ! – MyMedia Myanmar
ချစ်စရာ ကောင်းပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ Drag ပြိုင်ကား တစ်စီးအဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ့် Honda E-Drag !
Tokyo Auto Salon ဆိုတဲ့ ပွဲကတော့ အမြဲလိုလို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေလေ့ ရှိတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပြီးတော့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ Concept တွေ နဲ့ အခြားသော မတူညီတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကိုပါ တစ်စုတစ်စည်းတည်း တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ပွဲ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အခုနှစ်မှာ ကျင်းပ တဲ့ ပွဲကတော့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ အန္တရာယ်ကြောင့် Digital စနစ်နဲ့သာ ကျင်းပရတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ယခင်လို ပျော် စရာ ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ အရာတွေကိုတော့ ပေးစွမ်း နိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် ကားကုမ္ပဏီ Honda ကလည်း အခု ကား ပြပွဲမှာ ထူးခြားတဲ့ Concept တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သီးသန့်သုံး Drag Racer ကား တစ်စီးကို ချပြလာခဲ့ပြီး Honda ရဲ့ E All-Electric Hatchback အပေါ်မှာ အခြေခံ တည်ဆောက်ထားမှာပါ။ အဆိုပါ ကားကိုတော့ E-Drag လို့ အမည် ပေးထားပြီး Honda အနေနဲ့ကတော့ အပျော် သက်သက် စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်ရာ ထက်ကို ပိုအောင် တည်ဆောက်ထားတာ ကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Honda အနေနဲ့ အဆိုပါ ကားရဲ့ Body Panels တွေကို တည်‌ဆောက်ရာမှာ Carbon-Fiber Reinforced Polymer တွေကို အသုံးပြု ထားမှာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အမိုးကို သတ္တုတစ်မျိုးနဲ့ တည်ဆောက်ပြထား ပါသေးတယ်။ တကယ်တမ်းတည်ဆောက်မယ့် Body Panels အသစ်တွေမှာ ဆိုရင်ရိုးရှင်းတဲ့ Mounting Feature တွေလည်း ပါဝင်ဦးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကားရဲ့အလေးချိန်ကို အမှန်တကယ် လျော့ကျစေကာ ပေါ့ပါးသွားမှာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Honda အနေနဲ့ကတော့ E-Drag ရဲ့ ဘီးတွေကို တော့ NSX ထံက နေ ယူဆောင် ထည့်သွင်း သွားဖို့ ရှိနေသလို ၁၇ လက်မ အရွယ် ရှိမယ့် အဆိုပါ ဘီးတွေ ဟာ Drag Racer နဲ့ လိုက်ဖက်ဖို့ ဆိုရင် Honda ဘက်ကနေ Slicks တွေကို ထပ်မံ ထည့်သွင်း ရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Honda အနေနဲ့ ကားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ချိန် ညှိပေးနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း အဆင့်မြှင့်တင် ပေးထားမယ့် Suspension စနစ်ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုလာဖို့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဂျပန် ဘာသာနဲ့ ကြေညာထားခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ကားရဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ Honda ရဲ့ အဆိုအရ လျှပ်စစ်မော်တာတွေရဲ့ လည်ပတ်မှု အနေအ ထား ကနေပဲ Instant Torque ပုံစံ ကို ယူကာ ကားကိုလည်း Rear-Wheel Drive ကား တစ်စီး အဖြစ် ပုံဖော် သွားမယ်လို့ သိထားရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ကားအသစ်ရဲ့ Powertrain နဲ့ ပက်သက်လို့တော့ ဘယ်လို အပြောင်းအလဲတွေ ရှိလာမလဲ ဆိုတာကို မသိ ရှိရသေးပဲ လမ်းမထက်မှာ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် အမျိုးအစား မှာတော့ 136 hp ( 100 kW ) နဲ့ 154 hp ( 113 kW ) အသီးသီး ရှိမယ့် ၂ မျိုး အဖြစ် ပွဲထွက်လာမယ် လို့တော့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး Torque ပမာဏ စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ 232 lb-ft ( 315 NM ) အထိ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ကားရဲ့ နောက်ထပ် စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ တစ်နာရီကို ၆၂ မိုင် နှုန်း ရှိပြီး ( ကီလိုမီတာ ၁၀၀ နှုန်း ) အထိ ရှိကာ အမြင့်ဆုံး ရှစ်စက္ကန့် အတွင်း လုပ်ဆောင် နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ပေါ့ပါးတဲ့ E-Drag ဖြစ်တာ ကြောင့် အပြောင်းအလဲတော့ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အခု လ နှောင်းပိုင်းလောက်မှာ တင် ပဲ အဆိုပါ ကားအပါ အဝင် Hond ဘက်က ချပြထားတဲ့ ကား ၃ စီးကို ကြည့်ရှုသူတွေက ဆန္ဒမဲ ပေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်ကားကို စတင် ဖန်တီးမလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ Honda ဘက်ကလည်း လာမယ့် လ မှာ တင် ပရိသတ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု အများဆုံးရတဲ့ကားကို ကြေညာပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အခု ဖော်ပြထားတဲ့ E-Drag ဟာလည်း အခုနှစ် Auto Salon ပွဲထဲက ကား ပေါင်းများစွာထဲက တစ်စီးဖြစ်လို့ အခွင့်အရေး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော ကား Concept အဆန်းတွေ ဖြစ် တဲ့ Honda N-Van Mobile Cafe လိုမျိုးတွေလည်း ဆက်လက် ထွက်ပေါ်လာဦးမှာပဲ ဖြစ်လို့ ဆက်လက် ရင်ခုန်စွာ စောင့်ကြည့်ရဦး မှာပါ။
The post ချစ်စရာ ကောင်းပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ Drag ပြိုင်ကား တစ်စီးအဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ့် Honda E-Drag ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-17T14:00:42+06:30January 17th, 2021|MYCARS MYANMAR|